Welcome to Moethagyar Club
moethgyar community club :: Welcome to Moethagyar Community Club :: လူကြီးမင်းအား Moethagyar Community Club မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်... Share |
Subject: Welcome to Moethagyar Club Sun Oct 19, 2008 12:18 am
အခုလိုတစ်ကူးတစ်က လာရောက်တဲ့ လူကြီးမင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
လူကြီးမင်းအနေနှင့် Member ၀င်ပြီးနောက် Moethagyar Club အတွင်းသို့အတားဆီးမရှိဝင်ရောက်လည်ပတ်နိုင်မည့် အပြင် လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်
Forum များကို ပါဝင်ရေးသားနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Member ၀င်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ.....
Moethagyar Club သည် မြန်မာလူမျိုးများ ဘာသာမရွေး ကျား/မ မရွေး ၀င်ရောက်နိုင်ရန်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကဏ္ဍစုံစုံတို့ ဖြင့်ကြိုးစားတင်ဆက်ထားပါ သဖြင့် ကဏ္ဍတစ်ခုစီသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတိုင်းသည် Moethagyar Club ၏ကဏ္ဍများအပေါ်တွင် ဝေဖန် ပြစ်တင်ရန်မရှိပါသဖြင့် မိမိတို့ ၏ သဘောဆန္ဒအလျှောက်သာဖြင့်သာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါရန်အသိပေးအပ်ပါသည်....
Moethagyar Community Club
Last edited by Admin on Tue Oct 21, 2008 11:21 pm; edited 1 time in total
Location : Southern S'pore
Subject: HI ! Mon Oct 20, 2008 6:59 pm
Dear .. Moe Tha Gyar...
I'm arrived for support yr site, it's good for all Myanmar who intend to <numbers is growing> come to this Island,
I'll promote this site as much as I can.
Subject: Re: Welcome to Moethagyar Club Tue Oct 21, 2008 9:10 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗိုလ်မြတ်ရေ... စိတ်ကူးတဲ့တာလေးတွေလဲ post လုပ်သွားပါဦးနော်....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Welcome ပါ...
Subject: 18+ ထဲကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။ Mon Nov 10, 2008 6:20 am
18+ ထဲဝင်ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။ လုပ်ပါဦးကိုကိုအက်ဒ်မင်ရဲ့။
Subject: Re: Welcome to Moethagyar Club Mon Nov 10, 2008 10:00 pm
ဟဲ..ဟဲ... တို့ လို 18+ ထဲဝင်ချင်ရင် Admin ကြီးကို Levis တစ်ထည်လောက် ကန်တော့လိုက်လေ... အလကားစတာပါဗျာ Admin ဆီကို private message နဲ့ လှမ်းပြောလေဗျာ... ဒီထဲမှာလာရေးထားတော့ လူတွေအားလုံးသိကုန်တာပေါ့ ရှက်ဖူးလား....ဒိုင်ရှိုလေး ကျုပ်တို့ လိုလုပ်ပါဗျ....ဟီ..ဟိ...
Subject: Re: Welcome to Moethagyar Club Mon Nov 17, 2008 7:56 am
အား လုံး ကောင်း ပါ တယ်
Subject: ၀င်လာမိလို့ပါ Fri Jul 08, 2011 1:47 am
လမ်းမှားပြီး ရောက်လာလို့ပါရှင်။ ပျော်သလောက်နေပါရစေနော်....
Subject: Re: Welcome to Moethagyar Club
moethgyar community club :: Welcome to Moethagyar Community Club :: လူကြီးမင်းအား Moethagyar Community Club မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်...